सफलताकाे कथा : बुवाले खुदो बेचेर पढाएका ६ छोराहरु, दुई भाइ सिडियो ४ भाइ बने हाकिम - News 88 Post
June 15, 2021 N88LeaveaComment on सफलताकाे कथा : बुवाले खुदो बेचेर पढाएका ६ छोराहरु, दुई भाइ सिडियो ४ भाइ बने हाकिम
गुल्मी । गुल्मीको साविक बलेटक्सार गाविस–८ (हाल रुरु गाउँपालिका–४) ठानीडाँडाका बुद्धिप्रसाद पन्थ (८४) को उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ठूलो इच्छा थियो । पारिवारिक कारण र आर्थिक अवस्थाले गर्दा उनले त्यो बेला सामान्य लेखपढ गर्न जान्नेबाहेक माथिल्लो तहसम्म पढ्न पाएनन् ।
राइँला : विष्णुप्रसाद पन्थ (नेपाल टेलिकमको अधिकृत काठमाडौं)
लोक सेवामा असफल हुनुको कारण नजानेर मात्र हुँदै होईन । कहिलेकाँही विद्यार्थीले गर्ने सानासाना कमजोरीले पनि लोक सेवामा असफलता हात लागिरहेको हुन्छ ।
ती कमजोरी पहिचान गरेर सुधार गर्न सकेमा लोक सेवाको सफलता धेरै नजिक हुनेछ ।
तर त्यस्तो कमजोरी पहिचान गर्ने र सुधार गर्ने काम भने आफैँमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
लोक सेवा तयारीसम्वन्धी पढाउने र लोक सेवाको उत्तरपुस्तिका जाँच गर्नेहरुसँगको कुराकानीमा लोक सेवामा परिक्षार्थीहरुले अक्सर गर्ने गल्तिहरु पहिचान गरेका छौँ ।
– नबुझिकन धेरै कुरा पढ्ने, अव्यवहारिक कुराहरु पढ्ने ।
– सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर जे पायो त्यही पढ्ने । पढ्नुपर्ने विषयमा पनि अनावश्यक रुपमा पढ्ने ।
– जे–जे जान्नुपर्ने हो, सिक्नुपर्ने हो, त्यो भन्दा धेरै पढ्ने ।
– अरुको नक्कल बढि गर्ने ।
– स्तरभन्दा बढि वा कम पढ्ने । जस्तै अधिकृतको लागि तयारी गरिरहेको विद्यार्थी कोही सहसचिवले पढ्नुपर्ने कुरा पनि कण्ठ गरेर बसिरहेका हुन्छन् । केही विद्यार्थी नायब सुब्बा तहका लागि पनि नपुग्ने गरि अधिकृतको तयारी गर्छन ।
– प्रत्येक तहका लागि छुट्टै प्रकारको पढाइ, लेखाइ र तयारी शैली हुनुपर्छ । जाँचको नजिक आएपछि मात्र पढ्ने होईन, अलि अगाडी देखि नै पढ्नुपर्छ ।
याे पनि बाेनस् टिप्स
व्यतिकाे व्यत्तिगत लाभ,लाभांश, प्रतिफल, पारिश्रमिक वा अन्य जुनसुकै आय बापत राज्यलाइ अनिवार्य बुझाउनु पर्ने अार्थिक दायित्व नै आयकर हाे। नेपालकाे संविधानकाे धारा २५ सम्पत्तिकाे हकमा व्यत्तिकाे सम्पत्ति र आय मा प्रगतिशील तवरले राज्यले कर लगाउन र उठाउन पाउने छ भनि आयकरकाे संवैधानिक अाधार निर्माण गरिएकाे छ।
आयकर छुट हुने आयहरू
संघीय इकाइहरू (संघ,प्रदेश र स्थानीय तह)ले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा रकम,
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने जुनसुकै आय,
नेपाल राष्ट्र बैंककाे उद्देश्य अनुसार अार्जन भएकाे रकम,
सडक, पुल, विमानस्थल तथा पुर्वाधार निर्माण गरि प्राप्त हुने आय मा ४० प्रतिशत सम्म छुट
पर्यटन उद्याेगमा शशर्त छुट हुन्छ,
कृषि पेशा वा सहकारीकाे आय वा लाभांश
बाैद्धिक सम्पत्तिकाे निर्यात वा हस्तान्तरणमा निश्चित छुट,
राेजगारि सिर्जना, विशेष अार्थिक क्षेत्रका सञ्चालित उद्याेग र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा अाधारित उद्याेगकाे आय,
नेपाल सरकाले कुनै सन्धि,सम्झाैता गरि कर छुट दिने भनि गरेकाे कबुलियत अनरूपकाे आयमा,
कर तिर्न नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारकाे सेवामा राखिएकाे गैर नेपाली नागरिककाे पारिश्रमिकमा,
विदेशि सरकारी सेवा कार्यरत नेपालीकाे पारिश्रमिक रकममा,
विदेशि सैनिक वा प्रहरी सेवामा सेवा गरि हाल विदेशि सरकारि काेष बाट निवृत्तिभरण प्राप्त हुने रकममा,
उपहार, अपुतालि र छात्रवृत्तिमा,
कर छुट दिइएका संस्थाले प्राप्त गर्ने उपहार तथा चन्दामा,
उत्पादनमूलक उद्याेगले निर्यात गरेकाे आयमा २५ प्रतिशत सम्म छुट हुन्छ।
राज्यकाे अावश्यकता, अान्तरिक उत्पादकाे संरक्षण, सार्वजनिक खर्चकाे व्यवस्थापन लगायतका हरेक दृष्टिकाेणकाे संयुत्त मुल्यांकन बाट व्यत्तिकाे आयमा आयकर छुट छुट दिने गरिन्छ। नेपालमा आयकर छुट प्रगतिशील तरिकाले लागु भएकाे सन्दर्भमा यस्ले सामाजिक न्याय कायम र समानता प्राप्तिका दिशामा आयकर छुट अवलम्बन गर्नु पर्दछ।
लाेकसेवा तयारी गर्दा ध्यानदिनुपर्ने कुराहरू
पहिला विषयवस्तुको अवधारणा के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । जस्तै निजामति सेवाको विषयमा अध्ययन गर्दा शूरुमा निजामति सेवाको अवधारणा के हो र कसरी आयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ ।
अवधारणामा स्पष्ट भएपछि त्यो अवधारणाले सिद्धान्तको कसरी विकास ग¥यो भन्ने पढ्नुपर्छ ।
त्यसपछि त्यो विषयवस्तुको अवधारणा र सिद्धान्तलाई हाम्रो देशको कानुन र नीतिबाट कसरी समेटेका छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ । पढ्नुपर्छ । जस्तै जलवायु परिवर्तनको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको हो भने जलवायु परिवर्तन भनेको के हो ? यसको अवधारणा कसरी विकास भयो ? यसको सिद्धान्त के हो र यसलाई किन महत्व दिएका हौँ भन्नेकुरा बुझ्नुपर्छ ।
यसपछि जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हाम्रो देशले बनाएको कानुन के छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो कानुनको व्याख्या गरेपछि कानुनको कार्यान्वयनका लागि कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ भन्ने पनि लेखिनु पर्छ । र त्यो कार्यक्रमका व्यवहारिक पक्षहरु कस्ता छन् भन्ने पनि पढ्नुपर्छ । व्यवहारजन्य पक्ष लेखेपछि अवधारणा, सिद्धान्त, कानुन र कार्यक्रमवीच फरक कहाँ छ भन्ने कुरा पनि लेख्नुपर्छ । अन्तिममा निष्कष लेख्नुपर्छ । यसरी हरेक विषयलाई यो विधीबाट पढ्नुपर्छ ।
यस्तै तयारीको शिलशिलामा म अरु प्रतिस्पर्धीभन्दा नजान्नेमा पर्छु भन्ने मान्यता राखेर मेहनत गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक दिन एउटा विषयमा पूर्ण अध्ययन गर्ने र अध्ययन गरेर कण्ठ गरेपछि परिक्षा नै हो भन्ने सम्झेर निश्चित समयभित्र लेख्ने अभ्यास पनि सँगै गर्नुपर्छ ।
यसरी हरेक शीर्षकमा ध्यान दिएर पढ्दै लेख्दै जाने अभ्यास ग¥यो भने लोकसेवा परिक्षा पास गर्न अप्ठेरो पर्दैन ।
आत्तिएर पढ्यो भने परिक्षामा झनै असफल हुन सक्छ । धेरै पढाइले झनै असफल हुनसक्छ । त्यसैले हरेक कुरालाई सावधानिक रुपमा अध्ययन ग¥यो भने तीन/चार महिनाको तयारीमा लोकसेवा परिक्षा उत्रिर्ण गर्न सक्छ ।
दोस्रो र तेस्रो पेपरको तयारी गर्ने विद्यार्थीले ५० देखि ६० वटा विषयवस्तुलाई यो विधीमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यो शैलीबाट लोकसेवा तयारी गर्नेहरु पास भएका छन् ।
धेरै विद्यार्थीहरु गुगलमा खोजेर एउटै विषयमा ४/५ दिन लगाएर पढ्ने गर्छन । तर त्यस्तो गर्नुहुँदैन ।
थोरै पढ्नुस्, चाहिने कुरामात्र पढ्नुस् ।
धेरै पनि नपढ्नुस् । स्पष्ट रुपमा पढ्नुस्, खारेर पढ्नुस्, थोरै पढ्नुस् तर आवश्यक मात्र पढ्नुस् र सरकारी तथ्यांकहरुमा असाध्यै ध्यान दिएर पढ्नुस् ।
लोक सेवा आयोगले रोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा दशैँअघि गरिसक्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भए पनि नियुक्ति भइनसकेको तथा कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण लोक सेवासम्बन्धी परीक्षाको आन्तरिक तयारी मात्रै भएको हो ।
April 21, 2021 October 18, 2021 N88